किन माता सबिता एका एक दुबई पुगिन ! खाडीको चर्को घाममा पसिना बगाएका नेपालीहरुले पाउलान त् राहत उनको भविष्यवाणी बाट ! (भिडियो सहित) - Complete Nepali News Portal
किन माता सबिता एका एक दुबई पुगिन ! खाडीको चर्को घाममा पसिना बगाएका नेपालीहरुले पाउलान त् राहत उनको भविष्यवाणी बाट ! (भिडियो सहित)
ScotNepal April 13, 2019
सबिता सरु शर्मा आचार्य २०४५ सालमा धनकुटामा जन्मिनु भएको हो । उहालाई ७ वर्ष को उमेर देखि नै अलौकिक शक्तिको ज्ञात भएको हो । माताका वाणीहरु, मानिसले घमण्ड र रीष गर्न छाडौ ऑफै ऊन्नति र प्रगति हुन्छ, हरेक मानिसको जीवन जिउन साँच्चै काहां सजिल छ र? एक न एक तनाव ले सधै पछि लागेर पछ्याईरहन्छ।
कसैले बोलेर मात्र हुदैन काम गरेर पनि मन जित्न सक्नुपर्छ।, जो व्यक्ति आफनो रिसलाई आफनो टाउकोमा खन्याउन सक्षम हुन्छ ,उसलाई अरुको रिसबाट बच्नुपर्दैन।, ऋण र शत्रुलाई कहिल्यै पनि ठूलो हुन नदिनुस, प्रार्थना गर्ने ओठ भन्दा सेवा गर्ने हात अघि सार्नुस यो नै धर्म हो, मँन राम्रो भएपछी सबै कुरा राम्रो देखिन्छ ऑफ्नो ऑखाले, रिसाऊनु भनेको ऑफ्नै मनको शान्तिलाई भष्म पार्नु हो, कसैको बारे नकारात्मक सोच राखेर प्रत्यक्ष क्षण बिताऊनु भन्दा ऑफ्ना लागि सकारात्मक तरिकाले सोच्नु अमूल्य समयको सही सदुपयोग हो ।
माता समय समयमा बिभिन्न मिडिया हरुबाट आफ्नो सुझाब हरु भक्तजन हरुलाई सप्रेसन गरि राख्नु भएको हुनुन्छ । त्यस्तै पछिल्लो समयमा उहाको मलेशियाको यात्रा पनि सफल भएको थियो र अहिले सबिता माता युएइ को दुबईमा पुग्नु भएको जानकारी हाम्रो फोन सम्पर्कमा गराउनु भएको छ ।
आखीर माता सबिता खाडी मुलुक दुबईमा जानु को के अर्थ हो त पुरा जानकारी सहित तलको भिडियो मा हेर्नु होला ।